Agasti egcekeni. Isuka buthule sokuvuna bekulokhu ngenyanga sokuthokoza amakhaya hhayi kuphela, kodwa futhi ukuba wonke umgwaqo. Lokhu apula uMelba, uMelba noma, izithelo namanzi futhi eliqhakazile uvuthwe esikhaleni lapho engadini usehambile strawberry kanye currants, kanye eliphakathi kwe kanye nezinye izinhlobonhlobo apula ongakabi usuqalile uvuthwe.
Izintandokazi zonke apula beza kithi elivela phesheya kolwandle, kuba Canadian wolimi. Kulokhu, impande esihle e Ezindaweni ezahlukene Russia - futhi phakathi, futhi uzuze ngokwengeziwe ezindaweni eningizimu. Umunyu apula abandayo uMelba Yiqiniso, akanakuma, kodwa i-grade isilinganiso imingcele kuyinto ngempela ubusika eziqinile.
Lena isihlahla esihle kakhulu. Ukuze usayizi ezinkulukazi engakhuli, kodwa ukwakheka kahle umqhele iba yangempela umhlobiso yensimu. Convex akushiyela onqenqemeni crenate ka Melbu yakhe zihlukaniswa kusuka nezinye izinhlobo, kanye ukushuba isilinganiso amagatsha ahlale iminyaka, made futhi amandla awo abasebasha. Umuntu onobungane enganginaye phakathi izimbali apula izihlahla kusuka ukubukeka kungenzeki kude - ke kancane like Sakura, umbala lemva.
Njalo ngemva kweminyaka ethile, yokuphumula isihlahla, kodwa ezinye izinkathi zonyaka, ke Kugcizelela ne fruiting zawo zaziziningi. Nakuba phezu amagatsha Kumiswa njengoba izithelo eziningi ukuthi umuthi ayibukeki athwale isisindo sabo. Kodwa ubunjalo ohlakaniphileyo: apula izinhlobo uMelba ukwazi kancane kancane ukuqeda zelentsov extra, ushiya amagatsha kakhulu ngendlela angenza. Futhi kugcina amagatsha esihlahla ukuze isibalo saso omkhulu izithelo!
Yini isimanga, uMelba apula ayenzi zabanikazi (ngaphandle-ke, sikhuluma ebaleni amancane awulungele ezezimbono) ukuqoqa isivuno. Okuningi ngokunembile, awusebenzi amnike ithuba ezifana: apula sesivuthiwe kuwele phansi. Ngakho-ke, kuyinto efiselekayo salokhu isihlahla ukutshala Turf ethambile apula akazange alwe. Konke waletha udliwe ngosuku olufanayo - mnandi kakhulu ukubheka futhi kumnandi ukunambitheka izithelo obomvu-emthende. Yiqiniso, ungakwazi futhi sigweme off izithelo ngiziqoqele kubhasikidi, ukukha ripest. Into ungubani, abazi uvuthwe konke ngesikhathi esisodwa, lokho imfihlo fruiting zabo ezinde. Uma ukuqoqa akayena ngempela sesivuthiwe, kungenzeka ukugcina in the esiqandisini izinyanga eziningana.
White, inyama namanzi apula yalesi ezihlukahlukene akutholakali ukunambitheka amnandi futhi omuncu. Uma eziningi izithelo, kuyohlala futhi ukusetshenziswa fresh, futhi izithelo iyisitshulu, futhi ujamu kanye nesiphuzo.
Yini Ukunakekelwa uMelba uthanda apula esihlahleni? Incazelo ezihlukahlukene esabela ukuba izinhlobonhlobo yemifino kanye uncoma imithetho ngokuqukethwe okuhlobene. Njengoba elisho into encane - ungakwazi ukugembula emva zonke esakhula ukuba ngamamitha amathathu - akusiwona kancane ngakho ngenxa apula. Ngokuphathelene anakekele - zonke izihlahla apula like into efanayo: ekwindla ukutshala evundile loam umhlabathi, izihlahla ngesikhathi esifanele - ngaphambi ukugeleza ubisi. Njengoba for izici izinhlobo, apula uMelba has omunye inzuzo: akadingi fafaza ngokuvamile. Okuningi ngokunembile, akukho isikhathi ukucubungula amaningi. I sishaye sokuqala Kwenziwa ngaphambi ekuqaleni Olufufusayo - ukubhubhisa izinambuzane overwintered. Esesibili - ngaphansi ihlumela pink ukuvimbela izibungu ukuthuthukisa apula esihlahleni imbali Weevil. Lapho isihlahla lithela, bazokwazi ukucubungula kusukela inundu. Kodwa njengoba ezihlukahlukene ukuvuthwa ngokushesha, amakhemikhali ukuhlaselwa kule stop. I isikhathi sokukhulelwa kubalulekile ukuba ningayeki esihlahleni ukuze uzizwe ukushoda umswakama, ngaphandle kwalokho izithelo yithela mass ngaphambi kwesikhathi. Yiyo yonke ukunakekelwa, bese - uphathe kuphela sithathe izithelo ezivuthiwe ne utshani dewy!
Isifo Phalaenopsis - umphumela ukunakekelwa okungafanele
Sibutsetelo ulwanga. Kuyini carpaccio